spectrum School > Baro + Dabagal > B-Flow
In our Darajada Koowaad ee Heerka Koowaad B Marka lagu daro waxbarashada guud, waxaad ka shaqeyn doontaa mashruuc ku saleysan Tiknolojiyadda. Waxa kale oo aad ka dooran kartaa noocyada Daryeelka / timaha daryeelka, Abuurista, Wershadaha, Cuntada & Ganacsiga. Sannadka labaad, marka lagu daro casharrada guud, waxaad doorataa ikhtiyaar aasaasi ah: FARSAMADA CADAARADA (qoryaha, farsamada & korontada) iyo cilmiga bulshada (Daryeelka Timaha, Daryeelka & Nafaqada)
Farsamooyinka STEM sanadka 2-aad
Sanadka 2aad Bulshada & Daryeelka
In Sannad B ee X-XUMXe waxaad heshaa qayb ballaadhan oo ah waxbarashada guud ee aasaasiga ah oo isku mid ah qof walba. Waxaad sidoo kale ka shaqeyn doontaa mashaariicda ku yaal Techniek iyo Art iyo Dhaqanka. Waxa kale oo aad dooran kartaa doorashooyinka Daryeelka / Daryeelka Timaha, Abuurista, Warshadaha, Nafaqada & Ganacsiga. Waxaad raacdaa nidaamyada xulashada 2 mudo hal mar ah galabtii toddobaadkii.
Gudaha Farsamada waxaad ku dhex mari mashaariicda iyo mawduucyada si aad u sameyso waxyaabo kala duwan, had iyo jeer waafaqsan tallaabooyinka kala duwan ee habka farsamada.
Gudaha Fanka iyo Dhaqanka waxaad baraneysaa inaad ogaato fursadahaaga hal-abuurka ah iyo inaad ku horumariso mawduucyo xiiso leh. Waxaad kaloo naftaada naftaada ka abuuri kartaa!
1B (.pdf, 127KB)
STEM waxay u taagan tahay Sayniska, Teknolojiyada, Injineerka iyo Xisaabaadka. Gudaha ikhtiyaarka aasaasiga ah 2B Farsamooyinka STEM adiga iyo macalinkaaga ayaa u dhaqaaqi doona si aad u ogaatid oo aad horumar ugu sii sameysaan kartidaada gudaheeda inta lagu gudajiro koorso STEM ah. Tani macnaha guud Macdanta Korontada, Farsamada & qoryaha
Halkan guji si aad u hesho bogga tababarka faahfaahsan iyo miiska casharka
ah ikhtiyaarka aasaasiga ah 2B Bulshada iyo Daryeelka samaqabka iyo dadku waa udub dhexaadka bulshada. Waxaad baran doontaa dhowr fikradood oo aasaasi ah iyo farsamooyin aad ku horumarineyso oo aad ku sii waddo wada noolaashahaaga, caafimaadkaaga iyo qaab nololeedkaaga bulshada ku kala duwan. Tani macnaha guud Daryeelka Timaha, Daryeelka & Nafaqada
Haddii aad gudbaan fasalka koowaad B-socodka, waxaad bedelan kartaa in taacliinta oo dhan gudahood BSO ah. Waxaad quruxsan si taxadar leh oo ku saabsan in habka aad filan daryeel iyo haddii aad leedahay aqoonta lagama maarmaanka u malaynayaa.
> Baro koorsooyinka shahaadada 2e ee dugsigeenna.
> Raadi dhammaan koorsooyinka 2e.